लुटेराको एक समूहले सात मिनेटभित्र ५० लाख बराबरको गर-गहना र दुई लाख लुटेपछि…. « News24 : Premium News Channel
लुटेराको एक समूहले सात मिनेटभित्र ५० लाख बराबरको गर-गहना र दुई लाख लुटेपछि….
नयाँ दिल्ली, १५ भदौ । पूर्वी भारतको पाण्डप नगरमा गत विहीबार केही लुटेराहरुले कनिष्क ज्वेलरर्सको शोरुम लुटेका छन् । ज्वेलर्सको शोरुम भित्र घुसेका तीन जना लुटेराहरुले व्यापारी दम्पतीलाई पेस्तोल देखाएर भुँईमा बसाए र त्यहाँ भए भरका सारा ज्वेलरीहरु झोलामा हाले ।
यसरी गर-गहनाहरु लुट्दै गर्दा बाहिरबाट लुटेरा समूहको एक जनाले भने निगरानी गरिरहेका थिए, भने अर्को एक जनाले भने गाडीमै बसिरहेका थिए । ती लुटेराहरुल ५० लाख भारु बराबरको ज्वेलरी र दुई लाख नगद लुटेका छन् । लुटेराहरुले सबै लुटिसकेपछि उनीहरु गाडीमा फरार भए । साथै ती व्यापारी दम्पतीले सिसिटिभि फुटेज लिएका छन् ।
साथै ती व्यापारी दम्पतीले हुलियासहित प्रहरीलाई खबर गरेका छन् । अहिले प्रहरीले ती लुटेराहरुको स्केच तयार गरिरहेका छन् । यो घटना पाण्डप नगरको गल्ली नम्बर ७, एफ ब्लक ३०८ मा कनिष्क ज्वेलरीको शोरुमको हो । शो शोरुमका मालिक विजय शर्मा हुन् । उनी आफ्नो ज्वेलरी शोरुमको नजिकै १५० कदम नजिकै परिवारसँग बस्दै आएका छन् ।
सो शोरुममा कुनै पनि काम गर्ने मान्छे छैनन् । सेक्युरिटिको हिसाबले त्यस शोरुममा पाँच वटा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ । भित्र तीन वटा र बाहिर दुई वटा । गत विहीबार ११ः१५ बजे विजय र उनकी पत्नी प्रियंका सो शोरुम खोलेका थिए । दुवैले पूजा गरिसकेपछि सबै गर-घहनाहरु सजाएर राख्न सुरु गरेका थिए । सोही समयमा ती लुटेराहरु आईपुगे ।
ती लुटेराहरुले सात मिनेटमा उनीहरुसँग भएभरको सारा गर- गहना र रु दुई लाख भारु लुटेर फरार भइसकेका थिए । लुटेराहरु ११ः ४५ बजे त्यस ज्वेलरीको शोरुममा छिरे । दुई जनाले भने पेस्तोल झिकेर ती दम्पतीलाई डराईराखेका थिए भने अर्को एक जनाले सारा गर- गहना झोलामा हाले । साथै लकरमा रहेको दुई लाख पनि निकाले । ती लुटेराहरुले उनीहरुको मोबाइल पनि खोसेका थिए ।
यसरी लुटपात भएपछि ती दम्पती नजिकै रहेको आफ्नो घर पुगे र प्रहरीलाई जानकारी गराएका थिए । अहिले प्रहरीले ती लुटेराहरुलाई खोजिरहेको छ ।